🥇Best Islamic Trading Accounts July 2022 Pros and Cons Uncovered
လက်ရှိတွင်အစ္စလာမ်ဘာသာ၏နောက်လိုက် ၁.၈ ဘီလီယံခန့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏လေးပုံတစ်ပုံနီးပါးရှိသည်။ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံအမျိုးမျိုးသည်မည်မျှခွင့်ပြုသည်ကိုလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာကဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သတင်းကောင်းမှာအစ္စလာမ့်အကျိုးဆောင်စာရင်းနှင့်ဟလာလ်ကုန်သွယ်မှုသည်လုံးဝဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအချက်ဖြစ်သည်။
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရအစ္စလာမ်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသည် Haram ဟာအနက်ရောင်နဲ့အဖြူရောင်တွေလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အပြင်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကိုလည်းအစ္စလာမ်သာသနာကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူများကိုကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်စေရန်ဖန်တီးထားပြီး၊
ဥပမာ Forex ကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်နေစဉ်မှာ၊ သင်ဟာသင့်ရဲ့ထိတွေ့မှုကိုမှန်ကန်သောစွန့်စားမှုနှင့်ကတိကဝတ်ဖြင့်တွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့်ကုန်သွယ်နေသမျှကာလပတ်လုံး - သင်သည်အစ္စလာမ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤစာမျက်နှာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ဟူသည်နှင့် အစ္စလာမ့်ဘဏ္ဌာရေး၏အခြေခံအုတ်မြစ်များနှင့် မည်သို့ဆက်စပ်နေသနည်းဟူသည့်အရာအားလုံးကို ဆွေးနွေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခွင့်ပြုနိုင်သနည်း၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်သော Sharia-ကိုက်ညီသော ပွဲစားတစ်ဦးကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်ကို ဆွေးနွေးပါမည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်တွေကိုတက်ကြွစွာအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်သီးသန့်ဖန်တီးထားတာပါ။ ဤအကောင့်အမျိုးအစားကို 'swap-free account' ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိဟုဆိုလိုသည်။
ရိုးရာပွဲစားများကဲ့သို့အစ္စလာမ့်ပွဲစားများမများသော်လည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုမိုပေါ်ပေါက်လာသည်။ မှတ်ချက်ပြုရန်မှာပွဲစားကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်တိကျသော 'အစ္စလာမ့်အကောင့်များ' ကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်းများစွာသောသူတို့သည်စံသတ်မှတ်ထားသောအကောင့်တစ်ခုကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ရှရီယာဥပဒေနှင့်အညီပြုလုပ်ထားသည်။
ရှရီယာဥပဒေ၏အုတ်မြစ်ချသည့်အခါချေးငှားသူနှင့်ငွေချေးသူစပ်ကြားဆက်ဆံရေးသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ချေးယူသူသည်အကျိုးအမြတ်အများဆုံးခံစားနေရသောချေးငှားသူကြောင့်အကျိုးစီးပွားသည်ယုတ္တိမရှိဟုယူဆကြသည်။ အစ္စလာမ်သာသနာ၌, ဒီအကျိုးစီးပွား 'Riba' ဟုခေါ်တွင်ပေမယ့်တစ်ချိန်ကအကြောင်းပိုမို။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ယူဆထားသော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာသည် ဖြတ်တောက်ပြီး ခြောက်သောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ Sharia ဥပဒေအရ ကုန်သွယ်မှုသည် 'လက်ချင်းချိတ်' လျှင် ဟာလာလ်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာပေါင်းများစွာက ဤကဲ့သို့သော အရာများကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ရောင်းဝယ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ရှေ, ဂြုံဆား၊ နေ့စွဲများ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ၂၁ ရာစုကိုရှေ့ကိုမြန်မြန်သွားပြီးကုန်သွယ်ရေးအများစုကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုပ်တယ်။ အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်ယခုအခါအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ရသဖြင့်ကုန်သည် ၁၀ သန်းနီးပါးသည်အွန်လိုင်းပွဲစားများကိုကမ္ဘာအနှံ့စျေးကွက်များတွင်ပုံမှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အသုံးပြုကြသည်။
လက်အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အခြေခံသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည် - ကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်ကို 'session' တစ်ခုတည်းတွင်ပြီးစီးရန်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာအမှာစာအားလုံးကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်
Engish တွင် 'Riba' ဟူသောစကားလုံးသည် 'စိတ်ဝင်စားမှု' သို့ပြန်ဆိုသည်။ အာရဗီဘာသာတွင်မူတိုးပွားမှုနှင့်ပိုလျှံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ Riba သည် Haram ကိုသံသယရှိစရာမလိုပါ၊ အများအားဖြင့်၎င်းသည်အနှုတ်လက္ခဏာကြီးထွားမှုနှင့်အကျင့်ပျက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုမြှင့်တင်ရန်ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီယုံကြည်ချက်ကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့အေဒီ ၆၀၉ နဲ့စီအီး ၆၃၂ အတွင်းမှာပထမဆုံးကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာဖော်ပြထားတယ်။
၎င်းကိုအစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုနောက်လိုက်များက Bai 'al-'Inah (ရောင်းချခြင်းနှင့်ပြန်လည် ၀ ယ်ယူခြင်း) ဟုခေါ်ဝေါ်သည်။
ငွေချေးသူတွင်အမြတ်အစွန်းပါ ၀ င်သည်
ငွေချေးသူသည်ချက်ချင်းပင် (သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းအတိုင်း) အမှန်တကယ်ငွေဖြင့်ပစ္စည်းကိုပြန်လည်ဝယ်ယူသည်။
အစ္စလာမ့်အကျိုးဆောင်စာရင်းများမှတဆင့်ဟလာလ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သည့်အခါအထက်ဖော်ပြပါ Riba စည်းမျဉ်းနှင့်အညီသင့်အကောင့်တွင်မည်သည့်အကျိုးစီးပွားမှမပေးဆပ်ရကြောင်းပံ့ပိုးသူကအာမခံလိမ့်မည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်ဘဏ်ငွေစာရင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းနှင့်ငွေစုဘဏ်စာရင်းများသည်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။
လောင်းကစားခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းတို့သည်ရှရီယာဥပဒေအရစာတန်၏လက်ရာကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူကြသည်။ ဤအထူးသဖြင့်စည်းမျဉ်း (အခြားသူများအကြား) ကိုအောက်ဖော်ပြပါအခြေခံများမှစီမံသည်။
၎င်းကိုအပြစ်ဟုယူမှတ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာသင်သာလျှင်ဥပမာအားဖြင့်ဖြစ်သည် တစ်ရက်ကုန်သွယ် - သင်ကအမြန်ငွေရှာဖို့သင်၌ရှိကြ၏။ အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကဤအရာအားလုံးကိုသင့်အားဖြောင့်ဖြောင့်ကျဉ်းမြောင်းစွာနေစေရန်ကူညီသည်။
Gharar: မသေချာမရေရာ / မသေချာမရေရာအန္တရာယ်
အကျိုးဆက်အားဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိသောဘဏ္transactionာရေးအရောင်းအ ၀ ယ်သည် 'gharar' ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပုံသေကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောသို့မဟုတ်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသောကုန်သွယ်ရေးအရောင်းအ ၀ ယ်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဥပမာ swaps, futures, forward, နှင့် options ။ ကျနော်တို့မကြာမီရရှိနိုင် / မရရှိနိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းပိုမိုပြောလိမ့်မယ်။
ကုန်သွယ်မှုသည်ဟလာလ်လားဟရမ်ဖြစ်စေမဟုတ်အဖြေသည်ရိုးရှင်းသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ဤသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဘယ်ကြောင့်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်အကောင့်တည်ရှိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာအနောက်တိုင်းကုန်သွယ်ရေးဓလေ့ထုံးတမ်းအချို့သည်အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်သည်။
အနာဂတ်နှင့်ငွေချေးစာချုပ်များကိုသေချာပေါက် haram ဟုသတ်မှတ်သည်။ ငွေချေးစာချုပ်များ (ဆူကူ) တွင်အတိုးနှုန်းအပေါ် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်သောကြောင့်၎င်းတို့အားတားမြစ်သည်။ ငွေချေးစာချုပ်များဖြစ်တဲ့အခါ ကုန်သွယ် မှတဆင့် CFDs - စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူး။ သို့ရာတွင် အတိုးနှုန်း၏တန်ဖိုးသည် အရင်းခံဖြစ်သည်။ ပျံ့နှံ့.
သင်သည်သင်၏စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပါကရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ် ၀ ယ်ခြင်းသည်ချက်ချင်းမဟုတ်ပါ။
၎င်းသည်ရှရီယာဥပဒေ၏ 'လက်ချင်းယှဉ်' အုပ်ချုပ်မှုကိုဆန့်ကျင်သည် (အပေါ်တွင်ကြည့်ပါ) ။
binary options များ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတိုင်းအတာအတွင်းစျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားခြင်းပါဝင်သည်။ ကုန်သွယ်မှုဤနည်းလမ်းသည်ကုန်သည်များအဖို့ငွေရှာရန်လူကြိုက်များသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း binary options သည် haram ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ အဓိကအားဖြင့်အကျိုးဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပွဲစားကိုပေးရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ အစ္စလာမ်သာသနာကိုနှစ်သက်တဲ့လူတစ် ဦး ဟာကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကိုအသုံးပြုဖို့ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအကောင့်တွေကိုလူတိုင်းကုန်သွယ်ခွင့်ရဖို့မျှတတဲ့အခွင့်အရေးပေးဖို့ကြံစည်ထားတယ်။
နောက်ပြီးမင်းတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုငါတို့ရှင်းနေတာပေါ့ နိုင် အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်အကောင့်များနှင့်အတူကုန်သွယ်။
အထက်ဖော်ပြပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သော်လည်းအစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုကိုဆက်လက်တည်မြဲရန်အတွက်စည်းမျဉ်းပွဲစားတစ် ဦး နှင့်အစ္စလာမ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကိုကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်အမှန်တကယ်မည်မျှရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ Riba အစ္စလာမ့်ဥပဒေအတွက်သော့ချက်နိယာမများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင်းထပ်မံရှင်းပြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ ကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် Forex ဈေးကွက်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းသည်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤပွင့်လင်းသောအနေအထားသည် 'လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်' ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ၎င်းမှာအခြေခံအားဖြင့်ညအိပ်ရန်ငွေကြေးသို့မဟုတ်အတိုးနှုန်းများဖြစ်သည်။ ပညာရှင်များအကြား Forex သည်လောင်းကစားခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်၊ မရှိသည်ဖြစ်စေငြင်းခုံမှုများစွာရှိခဲ့ပြီးထို့ကြောင့် Haram ဖြစ်သည်။
မတည်ငြိမ်သော Forex ဈေးကွက်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူတိုင်းသည်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုသည်လောင်းကစားလုပ်ခြင်းအထိမဟုတ်ကြောင်းသိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် - နည်းဗျူဟာများပါ ၀ င်သည်။ ဤအမှု၌, Forex အများဆုံးဆက်ဆက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
သင်၏လူကြီးများ၊ အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်ထူးခြားသောပစ္စည်းများကိုသင်၏အစ္စလာမ်အကောင့်ပံ့ပိုးသူမှတစ်ဆင့်သင်ကုန်သွယ်နိုင်သည် ပွဲစားတစ် ဦး စီသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်ကိုမှတ်ထားပါ။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည်တိကျသောစုံတွဲတစ်တွဲကိုစိတ်ဝင်စားပါက၎င်းသည်စင်မြင့်ပေါ်ရှိရရှိနိုင်မှုကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။
ဤနေရာတွင်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်အများစုထောက်ခံသော Forex အတွဲအမျိုးအစားအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
အရွယ်မရောက်သေးသူများ - EUR / GBP, GBP / AUD, AUD / JPY, GBP / CAD, EUR / NZD, CHF / JPY
ဗိုလ်မှူးများ: EUR / USD, EUR / USD, USD / JPY, AUD / USD, NZD / USD, USD / CHF
Exotics- USD / HKD, USD / SEK, USD / SGD, EUR / TRY, USD / MXN, EUR / HUF
Forex သည်အစ္စလာမ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များမှတဆင့်လဲလှယ်ရာတွင်ငွေလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်များမရှိပေ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဟလာလ်ဟုသတ်မှတ်သည်။ သတိထားရမည့်အရာတစ်ခုမှာကော်မရှင်ကဲ့သို့သောအခြားအခကြေးငွေများဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ပွဲစားသည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ငွေရှာရန်လိုအပ်သည်။
Forex အရောင်းအဝယ်ပြုသည့်အခါနှင့်တူသော crypto ဒင်္ဂါးပြားမရှိပါ အထူးသီးသန့် အစ္စလာမ့်ကုန်သည်များအတွက်။ သို့သော်သူတို့၏စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုသည်အတိုးထက်ရောင်းလိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားကိုအခြေခံသည်။ ထို့ကြောင့်အစ္စလာမ့်ငွေကြေးစည်းမျဉ်းများအရ cryptocurrencies ကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ထိုစဉ်ကပင်ကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးအနေဖြင့်အစ္စလာမ်မစ် crypto ဖလှယ်မှုတွင်တိုးတက်မှုရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဤနေရာတွင်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်အများစုမှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်ရန်ရရှိနိုင်သည့် cryptocurrencies အချို့ကိုတွေ့နိုင်သည်။
Cryptocurrencies သည်အတိုးနှုန်းအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိသောကြောင့်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်မရှိလျှင်ပင် crypto ဒင်္ဂါးများကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အကယ်၍ သင်ဟာပစ္စည်းတစ်ခုထက်ပိုပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်လိုလျှင်၊ ဟာလာလ်များကျန်နေသေးလျှင်သင့်လျော်သောအစ္စလာမ့်အကောင့်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။
အစ္စလာမ့်ဥပဒေ၏စည်းမျဉ်းများအရသင်သည်သင်၏ပွဲစားမှတဆင့်ဟလာလ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဂျုံနှင့်အထည်ကဲ့သို့ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းသည်ရာစုနှစ်များစွာကုန်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ တကယ်တော့လူသိများသောပရောဖက်မိုဟာမက် (pbuh) သည်အကောင့်အားလုံးမှဖြစ်သည် စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ် စီးပွားရေးသမား
သို့သော်ဒီနေ့နှင့်ယခုခေတ်တွင်ဟလာလ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်အခါသတိထားရမည့်အချက်များများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဂင်းနစ်လိုဘီယာမျိုးကိုမင်းမရင်းနှီးဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်၊ ဒါပေမဲ့မီးခိုးရောင်ဒေသတွေရှိတယ်။ ဟလာလ်ဟုထင်ရသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုဟားမာ့နည်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်။
တင်းကြပ်စွာ haram ထည့်သွင်းစဉ်းစားအစုရှယ်ယာ: အတိုး-အခြေခံဘဏ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ ခရီးသွားလာရေး၊ အရက်၊ စီးပွားရေးအာမခံလုပ်ငန်းများ၊ နိုက်ကလပ်များ။
အလေ့အကျင့်များကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ဟရမ်ဟုသတ်မှတ်သည် အတိုးဘဏ်စာရင်းများကိုအသုံးပြုသောကုမ္ပဏီများ၊ အတိုးချေးငွေဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့သောကုမ္ပဏီများ။
ဟလာလ်ဟုယူဆသောအစုရှယ်ယာများ - ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ၊ သတ္တုများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ အဝတ်အထည်၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ပရိဘောဂများ၊ ကိရိယာများ၊ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းရှယ်ယာများနှင့်အစုရှယ်ယာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါတွင်မီးခိုးရောင်areaရိယာတစ်ခုရှိသည်၊ သင်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်မှတစ်ဆင့်စတော့ရှယ်ယာများရောင်းဝယ်သောအခါသင်သည်မည်သည့်ဟရာမ်စတော့ရှယ်ယာနှင့်မျှတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ -Instead, သင်သည်သင်၏အစုစုကိုတည်ဆောက်ရန်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များနှင့်သတ္တုများကဲ့သို့အမှုအရာကုန်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
CFDs သည် ရှုပ်ထွေးပွေလီသော အရာဖြစ်သည်- အကြောင်းမှာ သင်သည် အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကို မပိုင်ဆိုင်သောကြောင့် Sharia ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဟု လူအများက ယူဆကြသည်။ ဤသည်မှာ အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များ ထပ်မံဝင်ရောက်လာပါသည်။ အတိုးနှုန်းအားလုံးကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးပြီး လဲလှယ်ပေးပါသည်။ ကုန်စည်, ညွှန်းကိန်းရှယ်ယာများ၊ ETFs နှင့်နှောင်ကြိုးများ။
ရိုးရှင်းသော 'ခေါ်ဆိုမှု' ရွေးချယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ရှယ်ယာများ၊ ငွေကြေးများနှင့်ငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ကို ၀ ယ်ယူရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ ၎င်းသည်စျေးနှုန်းသက်တမ်းမကုန်မီလေ့ကျင့်ခန်းဈေးထက်မြင့်တက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်ကုန်သွယ်မှုမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်သည်ပရီမီယံနှုတ်ယူခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်မျိုးစလုံးနှင့်ခြားနားချက်ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များတွင်ခေါ်ဆိုမှု option ကို 'urbun' (အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း - သိုက်) ဟုသိသည်။ urbun ကို အသုံးပြု၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ရှယ်ယာများအားအဆင့်မြင့်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်သည်။ ထိုစျေးနှုန်း၏ရည်မှန်းချက်သည်ကြိုတင် / သပိတ်မှောက်ခြင်းထက်ကျော်လွန်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ စျေးသည်သပိတ်မှောက်နှုန်းထက်မမြင့်ပါကဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုတည်းကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပေးချေခြင်း (ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်စျေးနှုန်းဟုလည်းခေါ်သည်) ဖြစ်သည်။ သင်, သို့သော်, ဒီလက်လွတ်ခွင့်ရှိသည်။
'put' option များအရအစ္စလာမ်ကုန်သွယ်ရေးတွင်၎င်းကို ''နောက်ပြန် urbun '။ တနည်းအားဖြင့်ရောင်းသူသည်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကျဆင်းသွားပါကအမြတ်ရရန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းအတိုင်းနောက်ပိုင်းတွင်သတ်မှတ်ထားသောဈေးဖြင့်ရောင်းနိုင်သည်။
အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များတွင် - ချည်နှောင်ခြင်းကို 'Sukuk' ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်အတိုးနှုန်းသို့မဟုတ်ကြွေးမြီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမရှိဘဲနှောင်ကြိုးကဲ့သို့သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်မှာအစ္စလာမ့်ကုန်သည်များသည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကျမ်းကျိန်လွှာများတွင်ငွေချေးစာချုပ်များထည့်သွင်းလိုကြသည်။
sukuk သည်ရိုးရာချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပေးသောကြောင့်၊ ၎င်းအစား၎င်းသည်အစ္စလာမ်ဥပဒေအရခွင့်မပြုသည့်ကြွေးမြီဆိုင်ရာတာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤငွေချေးစာချုပ်အမျိုးအစားကိုအစ္စလာမ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်မှတဆင့်ကူးပြောင်းသောအခါ - သင်သည်ထိုပိုင်ဆိုင်မှုတွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ပွဲစားသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဂရုစိုက်မည့်ပစ္စည်းသည်ဟလာလ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ သတိပြုရန်မှာအခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်သင်၏အမြတ်တွင်ထင်ဟပ်နိုင်သည့်ကုန်ကျစရိတ်များရှိနိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်သင်နှစ် ဦး စလုံးကုန်သွယ်နိုင်သည့်အသိပညာ၌လုံခြုံမှုရှိသင့်သည် နှင့် အစ္စလာမ်ပွဲစားများမှတစ်ဆင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ယုံကြည်မှုများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါ။
ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ဟာအမျိုးအစားအချို့ကိုရှင်းပြတော့မယ် ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်
အစ္စလာမ့် Swing ကုန်သွယ်ရေး
Swing ကုန်သွယ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ETFs, အနာဂတ်, Forex, cryptocurrencies, options များနှင့်စတော့ရှယ်ယာအတွက်အမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်၏ရေတိုရေရှည်တွေးဆဖြစ်ပါတယ်။ ဤရာထူးများကိုကုန်သွယ်မှုတစ်ရက်၊ တစ်ခါတစ်ရံရက်သတ္တပတ်များစွာကြာအောင်ဖွင့်ထားလိမ့်မည်။
အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်သည်ရှရီယာဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်၍ ကုန်သွယ်ခြင်းကိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာအစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ swap-free အစ္စလာမ်အကောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်အနေဖြင့်အတိုးနှုန်းများအားလုံးကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးသင်၏ရာထူးကိုတစ်ညလုံးဖွင့်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
သင်သတိထားမိသည်နှင့်အမျှတစ်နေ့တာကုန်သွယ်မှုသည်ကုန်သွယ်ရေးနေ့မပြီးမှီနှင့်သင်၏စျေးကွက်ကိုမပိတ်ခင်သင်၏ရာထူးကိုပိတ်ခြင်းပါဝင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်လဲလှယ်ရေးအခကြေးငွေမလိုပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤကုန်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုအစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးစည်းမျဉ်းများအရခွင့်ပြုထားသည်။
တစ်နေ့တာကုန်သွယ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာအစ္စလာမ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များမှတဆင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိစ္စများအတွက်သင်ကိုယ်တိုင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ သို့သော်ကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်မကုန်ဆုံးမီတွင်သင်နေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးအခကြေးငွေများရှောင်ရှားရန်ရာထူးကိုပိတ်ထားခြင်းသည်လုံးဝအခြေခံကျသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သာမန်အရစ်ကျအကောင့်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေပါက၎င်းသည်ပြanနာတစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်တွင်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မူဆလင် trading account - လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်များသည်မပါ ၀ င်သောကြောင့်အတိတ်နေ့ကုန်သွယ်ရေးအနေအထားကိုလွန်ခဲ့သောစျေးကွက်ဖွင့်ထားခြင်းအတွက်စိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အစ္စလာမ် ဦး ရေပြား
အနှစ်သာရခုနှစ်, ဉီးခေါင်းရေ စျေးကွက်အတွင်းရာထူးအမျိုးမျိုးကိုဖွင့်လှစ်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီသည်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကုန်ဆုံးသည်။ ဤအရောင်းအဝယ်သည်အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ခြင်း၏နောက်လိုက်များနှင့်အံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်စေပြီးအနေအထားတစ်ခုစီသည်လျှပ်စီးမြန်နှုန်းဖြင့်ပိတ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အကောင့်အမျိုးအစားမည်သို့ပင်ရှိပါစေလဲလှယ်မှုအခကြေးငွေမပါရှိပါ။
သီအိုရီအရ, သင်သည်ရိုးရာကုန်သွယ်အကောင့်မှတဆင့်ဤနည်းကုန်သွယ်နိုင်ဘူး။ အထူးသဖြင့်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များမှတဆင့်ကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်ရာထူးများကိုပိုမိုကြာရှည်စွာထိန်းထားနိုင်ရုံသာမက Riba မှကာကွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဤလမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းစံအကောင့်တစ်ခုဖြင့်ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်အစ္စလာမ်အကောင့်တစ်ခုအကြားကြီးမားသောကွာခြားချက်သည်လဲလှယ်ရေးအကျိုးစီးပွား (သို့မဟုတ်မရှိခြင်း) ဖြစ်သည်။ လဲလှယ်ရေးအကျိုးစီးပွားသည်သင်တန်းများကိုတစ်ညလုံးဖွင့်ထားခြင်းဖြင့်ဖန်တီးသည်။
အစ္စလာမ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးစီးပွားအားလုံးဖယ်ရှားပစ်သည်။ ထိုအချက်နှင့်အတူပွဲစားများသည် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေရှာရန်လိုအပ်နေသေးသည်။ ဤသည်သည်အခြားအခကြေးငွေညီမျှခြင်းသို့ရောက်ရာအရပ်ဖြစ်၏။
အားနည်းချက်တွေရှိရင်အားသာချက်တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာဘ ၀ မှာရှိတဲ့အရာတွေလိုပဲ။ အောက်ဖော်ပြပါအစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည်။
Sharia ဥပဒေကို မလေးစားဘဲ အလွယ်တကူ ကုန်သွယ်မှုပြုပါ။
သင်သည် ဟလာလ်စတော့များကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သည်။
အစ္စလာမ့်ဥပဒေအတွင်း သင်၏ကုန်သွယ်မှုအစုစုကို ကွဲပြားအောင်ပြုလုပ်ပါ။
လဲလှယ်ခ/ Riba မရှိပါ။
အချို့သော အစ္စလာမ့်ပွဲစားများသည် လဲလှယ်မှုများမရှိသည့်အတွက် အခကြေးငွေများစွာ ကောက်ခံကြသည်။
အကာအရံနှင့် ကွဲပြားမှုများအတွက် အကန့်အသတ်ရှိသည်။
ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် အကောင့်အနည်းငယ်သာ ရှိသေးသည်။
အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကိုစတင်အသုံးမပြုမီသင်၏ရှရီယာနှင့်လိုက်လျောညီထွေသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုစတင်လုပ်ဆောင်ရန်သင့်ကိုယ်သင်ပွဲစားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးရှာရန်လိုအပ်သည်။
အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များကို ပေးဆောင်သည့် ပွဲစားများကို သုတေသနပြုသည့်အခါ၊ သင်၏ရွေးချယ်မှုပလက်ဖောင်းသည် လိုင်စင်ရထားပြီး စည်းမျဉ်းများဖြစ်ကြောင်း အမြဲသေချာစေသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် UK တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး သင်၏ပွဲစားသည် လိုင်စင်ရထားသည်။ FCAထို့နောက် သင့်ရန်ပုံငွေများကို £85,000 (ကုမ္ပဏီ ဒေဝါလီခံရပါက) အထိ အကာအကွယ်ပေးပါမည်။
သင်၏ပွဲစားလိုင်စင်ရရှိရန်သေချာစေရန်နည်းလမ်းမှာဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလိုင်စင်နံပါတ်အတွက်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းနံပါတ်၏တရားဝင်မှုကိုသင်မသေချာပါကတရားဝင် FCA ၀ က်ဘ်ဆိုက် (သို့မဟုတ်အခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာအဖွဲ့) တွင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ပြန့်နှံ့ခြင်းသည်သင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုကြီးမားစွာပြောင်းလဲစေသည် နှင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးရှုံးမှု - အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ အကယ်၍ သင်သတိမထားမိလျှင်ပြန့်ပွားခြင်းသည် ၀ ယ်ဈေးနှင့်ရောင်းဈေးတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
GBP / USD မှာရှိတယ် ဝယ်ခြင်း 1.293 ၏စျေးနှုန်း3.
အဆိုပါ ရောင်းချ GBP / USD အတွက်စျေးနှုန်း 1.293 ဖြစ်ပါတယ်0.
ဤဥပမာကိုအသုံးပြု၍ GBP/USD သည်3pip ပျံ့နှံ့မှုရှိသည်။
အရင်းကျေရန် သင်သည် ဤကုန်သွယ်မှုကို3pip ဖြင့် တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
3 pips ပြီးနောက် မည်သည့်အရာမဆို အကျိုးအမြတ်ဖြစ်မည်။
သင်အကောင်းဆုံးအစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုရှာဖွေနေသောအခါသင်ပြန့်ပွားနှုန်းနိမ့်လေလေဖြစ်သည်။ သို့သော်အခွင့်အလမ်းများမှာသင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအကောင့်များနှင့်တွဲဖက်ထားသောပိုမိုမြင့်မားသောပြန့်ပွားမှုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်အခကြေးငွေများသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအကြောင်းပြချက်ပွဲစားအကျိုးစီးပွားအခကြေးငွေအပေါ်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကုန်သည်အများစုသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာအာရုံစိုက်လိုကြသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးထက်စျေးကွက်အနည်းငယ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ နောက်ဆုံးတွင်စျေးနှုန်းများကိုမည်သို့ဖတ်ရှုလေ့လာရမည်ကိုလေ့လာခြင်းသည်နားလည်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ, ကုန်သွယ်ရေးအနုပညာကိုကျွမ်းကျင်ဖို့၊ သမိုင်းဝင်စျေးနှုန်းအချက်အလက်တွေကိုနားလည်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့သင့်ရဲ့ပွဲစားဟာစျေးကွက်စိတ်ဓာတ်ကိုနားလည်ဖို့နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းအမျိုးမျိုးပေးသင့်ပါတယ်။
သငျသညျအပြည့်အဝအလိုအလျောက် EA စနစ် (စက်ရုပ်) ကိုအသုံးပြုသည်နှင့် passive ထုံးစံ၌ကုန်သွယ်နေကြသည်မဟုတ်လျှင်, ဤကုန်သွယ် tools တွေကိုအားလုံးတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ကြသည်။ ပွဲစားတိုင်းကဒီကိရိယာတွေအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းမှာမဟုတ်ပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့အချို့ကသင့်အတွက်အကျိုးရှိမှာပါ။
Reuters ကဲ့သို့သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ သတင်းများ။
ရှာဖွေရန်သောအဓိကမက်ထရစ်ကိုရောက်သောအခါငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည်ပြန့်ပွားမှုများ၊ အခကြေးငွေများနှင့်ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့်ရရှိသည်။ အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်အားလုံးအတူတူမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်စာရင်းသွင်းမလုပ်မီပွဲစားပလက်ဖောင်းတွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုလက်ခံရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်
အီး-ပိုက်ဆံအိတ် အစရှိတဲ့၊ PayPal က နှင့် Skrill.
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဘဏ်စာရင်းသို့ဘဏ်ငွေလွှဲဖြင့်ငွေသွင်းလျှင်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ရောက်လာရန်ကြာသည်ကိုသတိရပါ။ ဥပမာသင်သည် e-Wallet သုံး၍ ငွေသွင်းလျှင်ချက်ချင်းကုန်သွားသည်။
ပွဲစားကုမ္ပဏီမှကမ်းလှမ်းထားသောဖောက်သည်အထောက်အပံ့သည်အရေးကြီးသည်။ သင်ပလက်ဖောင်းကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်ရွေးချယ်မှုများကိုရနိုင်သည်ကိုကြည့်နိုင်သည် ရှေ့မှာ လက်မှတ်ထိုး ၂၄/၇ တိုက်ရိုက်စကားပြောခန်းနှင့်တယ်လီဖုန်းအထောက်အပံ့လိုင်းများကိုသင်ရှာဖွေသင့်သည်၊ သို့မှသာသင်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်အဖြေများလိုအပ်ပါကသင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်သင်၏အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုဖွင့ ်၍ ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်လုံလောက်သောအသိပေးသင့်သည်။ သင့်ကိုညာဘက်ခြေထောက်ပေါ်ချထားဖို့ဘယ်လိုစတင်ရမယ်ဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တယ်။
အဆင့် ၁ - အစ္စလာမ်အကောင့်ကိုစာရင်းသွင်းပါ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့် - ရှာရီယာဥပဒေအကျိုးဆောင်ပွဲစားကို ဦး ဆောင်ပြီးအစ္စလာမ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်လဲလှယ်မှုမရှိသောအကောင့်ကိုရှာဖွေပါ။ ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုခုကိုသင်မမြင်နိုင်ပါကဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများသည်၎င်းတို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်စံသတ်မှတ်ထားသောအကောင့်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် သီးသန့်စကားဝှက်ကို ရိုက်ထည့်ပါ – ထို့နောက်တွင် သင်၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းအချို့ကို ထည့်သွင်းပါ။ ဤသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတို့ကို တားဆီးရန် စည်းမျဉ်းအဖွဲ့များမှ ချမှတ်ထားသော KYC (သင့်ဝယ်ယူသည်ကို သိပါ) ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၂ - ကုန်သွယ်မှုသမိုင်းကိုထည့်သွင်းပါ
အချို့သော (အားလုံးမဟုတ်ပါ) ပလက်ဖောင်းများသည်သင်၏ယခင်ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်သက်ဆိုင်သောအပိုအချက်အလက်အချို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်ပွဲစားအားသင်၏အတွေ့အကြုံအဆင့်ကိုသဘောပေါက်ရန်ကူညီခြင်းဖြင့်သင့်လျော်သောအစ္စလာမ့်အကောင့်နှင့်အဆင်ပြေသောထုတ်ကုန်များကိုအကြံပြုသည်။
လှမ်း 3: သင်၏အကောင့်ထဲသို့အပ်နှံ
ယခုတွင်သင်သည်စာရင်းသွင်းပြီးပြီ၊ သင်အစ္စလာမ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကိုရှေ့ဆက်ပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်သည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသည့်အရစ်ကျပွဲ၌ရရှိနိုင်သောငွေပေးချေမှုရွေးချယ်မှုများထဲမှရိုးရိုးရှင်းရှင်းရွေးချယ်ပြီးငွေပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ။
သတိပြုပါ၊ အချို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် အနည်းဆုံး အပ်ငွေပမာဏရှိသည်။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် Capital.comဤသည်မှာ အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်အတွက် $1,000 သာဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော Capital.com ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများတွင်အကောင့်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည် ၁၀ မိနစ်ထက်နည်းနိုင်သည်။ သင်၌အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်တစ် ဦး ကိုကူးယူရုံတင်မကဘဲဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ တန်စက္ကူရန်ပုံငွေဖြင့်သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကိုသင်ရရှိနိုင်သူများအတွက်အစပြုသူများအတွက် Capital.com ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်ဟာအစ္စလာမ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကိုစဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပုံရတယ်။ မည်သည့်ပွဲစားသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည်ကိုသင်မဆုံးဖြတ်သေးလျှင် ၂၀၂၀ ၏ထိပ်ဆုံးအစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့် ၅ ခုကိုကြည့်ပါ။
၂။ AvaTrade - MT1 / MT4 အတွက်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များ
ဤသည်အစ္စလာမ့် - ဖော်ရွေပွဲစားအပြည့်အဝလိုင်စင်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ AvaTrade သည်သင်၏ယုံကြည်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုပုံစံတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်၎င်း၏အကောင့်များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝစိတ်မသက်မသာရှိပါသည်။ ပလက်ဖောင်း၏အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များသည်နေ့စဉ်လဲလှယ်မှုနှင့်နေ့ချင်းညချင်းကောက်ခံခြင်းမရှိသောကြောင့်ရှရီယာဥပဒေနှင့်လုံးဝကိုက်ညီသည်။
ပလက်ဖောင်းသည်ဟလာလ် Silver နှင့် Gold AvaTrade အစ္စလာမ့်အကောင့်များကိုပံ့ပိုးပေးသကဲ့သို့သင့်အားရေနံအနာဂတ် (swap-free) ကုန်သွယ်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်စျေးနှုန်းဇယားများအတွက်အထူးကောင်းမွန်သော MT4 နှင့် MT5 တို့တွင်ရှရီယာနှင့်လိုက်ဖက်သည့်ပွဲစားလည်းရနိုင်သည်။
သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးအပေါ်အတိုးနှုန်းလျှော့ချပြီးသင်၏အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်မှ Forex ကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် AvaTrade သည် admin ၏အခကြေးငွေများကိုကောက်ခံသည်။ ပွင့်လင်း Forex ရာထူးများအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေကောက်ခံလိမ့်မည်။
ဤပလက်ဖောင်းရှိသင်၏အစ္စလာမ့်အကောင့်မှ MXN, RUB, TRY သို့မဟုတ် ZAR forex အတွဲများကိုသင်မရောင်းနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အစ္စလာမ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သောအပ်ငွေမှာဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း sign up လုပ်ပါ၊ သက်သေခံအထောက်အထားကိုတင်ပြပြီး AvaTrade Islam account မှတဆင့်ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်တောင်းဆိုရန်ပုံစံကိုဖြည့်ပါ။
Capital.com သည်ကုန်ကြမ်း CFD များမှတဆင့်သင့်အားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုခွင့်ပြုသည်။ သို့မဟုတ်သင်က Copper ကော်ပိုရေးရှင်းကဲ့သို့သောကြေးနီသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများ၏စတော့ရှယ်ယာ CFDs များကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နိုင်သည်။ FCA နှင့် CySEC နှစ် ဦး စလုံးကအတည်ပြုသည်။ ပွဲစားသည်လက်ရှိတွင်ဖောက်သည် ၇၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
FCA နှင့် CySEC နှစ် ဦး စလုံးအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်
သင်မြင်သည်အတိုင်း၊ အစ္စလာမ်သာသနာကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူများသည်ကုရ်အာန်၏စည်းမျဉ်းများကိုအပြည့်အ ၀ လေးစားလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးဥပဒေများအတွင်းကုန်သွယ်ရန်လုံးဝဖြစ်နိုင်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာမိမိကိုယ်ကိုစည်းမျဉ်းနှင့်ညီသောအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှာဖွေပြီးအစ္စလာမ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်တစ်ခုသို့စာရင်းသွင်းရန်ဖြစ်သည်။
ပွဲစားပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကိုမကြေငြာကြောင်းသတိရရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ အချို့ကို 'swap-free' အကောင့်များသို့မဟုတ် 'halal' အကောင့်များဟုခေါ်သည်။ အထက်ပါဖော်ပြချက်များကိုသင်မတွေ့မြင်နိုင်သော်လည်းထိုပွဲစားကိုစိတ် ၀ င်စားပါက၎င်းတို့အားအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပြီး၎င်းတို့သည်သင်၏လဲလှယ်မှုမရှိသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် standard account တစ်ခုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်အကာအကွယ်နှင့် စိတ်ငြိမ်သက်မှုအတွက်၊ FCA သို့မဟုတ် FCA ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားသော ပွဲစားတစ်ဦးနှင့်သာ မှတ်ပုံတင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အခိုင်အမာ အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ASIC - ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသည့်အရာများကဲ့သို့သော။
Capital.com သည် multi-asset platform တစ်ခုဖြစ်ပြီးစတော့ရှယ်ယာများနှင့် cryptoassets များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသာမက CFD များကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Cryptoassets များသည်မတည်ငြိမ်သောကိရိယာများဖြစ်ပြီးအချိန်တိုအတွင်းကျယ်ပြန့်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်လျော်ပေ။ CFDs မှလွဲ၍ အခြားကုန်သွယ်ရေး cryptoassets သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသောကြောင့် EU စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရကြီးကြပ်ခြင်းမရှိပါ
Capital.com USA LLC သည် CFD များကိုမပေးပါ။ ကိုယ်စားပြုမှုမရှိပါ။ Capital.com နှင့် ပတ်သက်၍ လူသိရှင်ကြားမရရှိနိုင်သည့်သီးခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်ကပြင်ဆင်ထားသည့်ဤထုတ်ဝေမှု၏တိကျမှု၊ ပြည့်စုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူမှုမရှိပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ရွေးချယ်သည့်ပွဲစားသည် demo account များကို၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် (ဥပမာအားဖြင့် eToro) ကမ်းလှမ်းပါကကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကိုအခမဲ့စမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။
swap-free အကောင့်သည်အစ္စလာမ်အကောင့်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ရှရီယာဥပဒေအရအတိုးနှုန်းကိုတားမြစ်ထားသောကြောင့်ဤအကောင့်သည်လဲလှယ်ရေးအခကြေးငွေ (အတိုးနှုန်း / ရိဘ) ကိုပယ်ဖျက်သည်။
မဟုတ်ပါ၊ ပွဲစားများအားလုံးသည်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များမပေးနိုင်ပါ။ အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကိုအထူးမကြော်ငြာပါ၊ သို့သော်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်စံနှုန်းတစ်ခုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ အချို့က swap-free အကောင့်များကိုလုံးဝကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ eToro နှင့် AvaTrade ကဲ့သို့သောပွဲစားများသည်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကိုပေးပြီးအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာဟလာလ်လို့ခေါ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာကုန်သွယ်သရွေ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ လမ်းညွှန်မှုအတွက်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်နှင့်ကပ်သင့်သည်။
၎င်းသည်ပွဲစားပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မူတည်သော်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်များသောအားဖြင့်လွယ်ကူသည်။ ကုမ္ပဏီအများစုသည် debit / credit cards, e-wallets နှင့် bank transfer များကိုလက်ခံကြသည်